ဘက်နတ္တန် (ဘာမီတွန် မဟုတ်ပါ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ဘက်နတ္တန် (ဘာမီတွန် မဟုတ်ပါ)
ဘက်နတ္တန် (ဘာမီတွန် မဟုတ်ပါ)
Posted by ムラカミ on Feb 28, 2012 in Business & Economics | 22 comments
Marketing လေ့လာပြီဆိုရင် မလေ့လာလို့ မစောင့်ကြည့်လို့ မရတဲ့ အရာတခုရှိပါတယ်
သူကတော့ ဘက်နတ္တန် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရသလဲ ဆိုရင်
ကမ္ဘာ့အတော် ဆုံး မားကတ္တင်းန် သမားအချို့ ရှိတဲ့ နေရာမို့လို့ပါပဲ …။
Luciano Benetton လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိတဲ့ Treviso မြို့က သင်္ဘောသား တယာက် က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ
(သင်္ဘောသီးတွေ မခေဘူးနော… စည်စည်ရေ …ကြိတ်ထားဟ) အရောင်အသွေးစုံလင်သော အ၀တ်အထည် ဈေးကွက်တခု ရှိလာမယ်
ဆိုတာကိုမြင်တဲ့ သူဟာ ညီတော်မောင်ရဲ့ စက်ဘီးကိုရောင်းပြီး အပ်ချုပ်စက် အဟောင်းလေး စတ်လုံး ကိုဝယ်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွယ်တာ ကော်လက်ရှင် အချို့ နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ သူဟာ စားသုံးသူတွေဆီက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ ရရှိခဲ့လို့
Veneto ဒေသမှာ စတိုးဆို အနည်းငယ် စတင် ဖွင့်လှစ် လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ညီမနဲ့ ညီငယ် ၂ယောက်ကို သူ နဲ့ ပူးပေါင်း စေပြီး
၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာတော့ “Benetton Group”ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာပါ ။
၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ Belluno မှာ ပထမဆုံး ဆိုင်ခွဲဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက် ၃နှစ်အကြာဖက်ရှင်မြို့တော် ဖြစ်တဲ့ Paris မြို့ထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Luciano ဟာ chairman အဖြစ် နဲ့ တာဝန်ယူပြီး သူ့ညီ Gilbertoက charge of administration, ညီအငယ်ဆုံး Carlo က production,ဖြစ်ပြီး
ညီမအငယ်ဆုံးGiuliana ကတော့chief designer ပါ..။
Benetton ရဲ့ အဓိက Brand lines တွေကတော့ United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton, Sisley နဲ့ Playlife
တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်အနေနဲ့ ကတော့ womenswear, menswear, childrenswear နဲ့ underwear တွေဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ perfumes, stationery,
eyewear နဲ့ travel bags တွေအထိ expend လုပ်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ယခုဆိုရင် Benetton ဟာ ကမ္ဘာတလွှား ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၆၄၀၀ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်းပေါင်း ၉၄၀၀ကျော်ကို အလုပ်ပေးထားပါတယ်။
global luxury fashion brand ဖြစ်တဲ့ Benetton ဟာ တနှစ်တာ turnover ၂ဘီလျံကျော် ရှိပါတယ်။
Benetton ရဲ့ Marketing လုပ်ယူသွားတဲ့ ပုံစံဟာ သူ့ရဲ့ မူလဘူတ တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ အရောင်အသွေးစုံလင်မှု ၊ ဆိုတာ အပေါ်မှာ
အခြေခံပါတယ်။ အရောင်စုံတယ် ဆိုတာ အပေါ်မှာမှ မတူဘူး ကွဲပြားတယ် မတူညီသော်လည်း အတူတကွ တည်ရှိနေကြတယ်
ဆိုတဲ့ အနှစ်သာရ ကို ဖြည့်ဆည်းပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက်မှာမှ အရောင်အသွေး အသွင်အပြင် မတူညီသော်လည်း သည်တခုကိုတော့
Common-shared, common-valued လုပ်ကြတယ်ဆိုတာမျိုး ပေးတာပါ …။
နောက်ထပ် Benetton ရဲ့ ထူးချွန်တဲ့ Marketing Campaign တွေ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ Awareness ကို
ဇောင်းပေး ကြော်ငြာလေ့ရှိပါတယ် ပြူးတူးပြဲတဲတွေ controversial တွေ သိပ်လုပ်ပြ တတ်ကြပါသေးတယ်။
အောင်မလေး ဘာကြီးတုန်းဟ မအော်ရရင် Benetton ကြော်ငြာမဟုတ်ဘူး ပြောရလောက်အောင် Guinness World Records
၀င် ပြူးတူးပြဲတဲ အနိုင်ဆုံးသော ကြော်ငြာတွေရိုက်လေ့ရှိပါတယ်။Oliviero Toscani ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့ လက်ရာတွေပါ..။
HIV/ AIDS အသားအရောင်ခွဲခြားမှု လူသားအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာတရား ချစ်ကြည်မှု စတာတွေကို ပြင်းပြင်းပြပြ ပုံရိပ်တွေသုံးပြီး
လှုံ့ဆော် နိုင်ခဲ့သူပါ….။ ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမယ့် … Benetton ဟေ့ ဆိုတာနဲ့ quality, colourful, controversial ဆိုတဲ့ ၀ိသေသတွေ
ပုံတွေ မတင်တော့ပါ …
သဂျီးတို့ အမေဒစ်ကင်န် သမတကြီး နဲ့ ဟူဂျင်းတောင်း အာဘွား ရှလူးတာ အစ(Unhate Program)
လူဖြူ လူဝါ လူမည်း နှလုံး ပုံတွေအလည် အေကိုက်ပြီး ကြွတော့မယ့် လူနာ ရောဂါခံစားနေရတာ အဆုံး
ရိုက်ပြထားတာတွေ့မှာပါ …. (သူ့သဘောကို မသိဘဲ ပုံတွေတန်း ကြည့်မိရင် ရွံစရာ စိတ်ပျက်စရာပါ..)
အမေဒစ်ကင်န်က CK ဟာလည်း ကွှန်ထရိုဗာရှယ် သိပ် ရိုက်ပြတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်..
သူကတော့ adult contents တွေမို့ …မဆွေးနွေးလိုပါ …. (sex sells သဘောတရား ပါ..)
Benetton အကြောင်း ရေးပြရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒီလိုပါ….။ Benetton လုပ်တာကို Zara လိုက်လုပ်ပါတယ်
Zara လုပ်တာကို Uniqlo လိုက်လုပ်ပါတယ် …. ဒီလို အတုယူပြီး စု-တု-ပြုကြရာမှာ ဟောင်ကောင်က Giordano ဟာ
အာရှမှာတော့ ထင်ရှားပါတယ်…။ Brand တွေရဲ့ quality နဲ့ ဈေး ကတော့ တဆင့်ထက်တဆင့် နိမ့်သွားပြီး social class
တဆင့်ထက် တဆင့် အနိမ့်ကို target လုပ်သွားကြတာပါ။
ကျနော်တို့ ညီမတွေ အစ်မတွေ ၁၃၁၁ယောက် သောက်စရာရေတောင် မရှိဘဲ ..လမ်းမထွက်ထိုင်နေကြရပါတယ်… ။
မဖြစ်စလောက် ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ဘ၀ကို ရပ်တည် ကြရတာပါ….။ သူတို့ မှန်တာ မှားတာ ကျနော် မသိပါ… သူတို့ ဘယ်လောက်
ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရလဲ ..ဘယ်လောက်ရသင့် သလဲ … ကျနော်မတွက်တတ်ပါ … ကျနော် သိတာကတော့ …. ကျနော်တို့ လူမျိုး
လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ယောက် သာ Benetton လို ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Innovation ရှိမယ်ဆိုရင် ..…. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
ပိုမိုပေါများလာပြီး စီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ် လို့ မြင်မိလို့ပါ…။ အနည်းဆုံး အာရှတလွှားတော့ Store-chain တွေ ဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့
မြန်မာ fashion brand တခုလောက် တွေ့ချင်စမ်းပါဘိဗျာ…။
(ဘုရားသိကြားမလို့ … ဒီစာကို ဂျော်ဒါးနိုးက မာကတ်တာ တွေ မမြင်ပါစေနဲ့ ….ဒက်ဂလောက်…. ဒက်ဂလောက်….)
ဂီ ကိုယ်တိုင်ကmarketing လုပ်နေပြီ သများတွေကိုအားကျရင် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့ လူငန်းရှင်ကို ဘာလို့မျှော်နေတာလဲ Benetton တောင် သင်္ဘောသားဘ၀ကနေ ဖြတ်သန်းလာတာ ဂီကရောမလုပ်နိုင်ဘူးလား…
လုပ်စားချင်ရင်တော့ .. .ပြောပါ …
ကျပ်ပေး အဲ့လေ. … အကြံ ပေးပါ့မယ်…
ကိုဂီရေ ……..ဘာမီတွန်ဆိုရင်တော့ မှိန်းပြီး အိပ်သွားပါပီ။
ဂျော်ဒါးနိုးက မာကက်တာ တွေတော့ ဖတ်မဖတ်မသိပါ။
ရန်ကုန်မြို့ က တိုလီမုတ်စ မာကက်တာဟောင်းကြီး ကတော့ ၀င်ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ။
အင်း……တခါ တခါတော့လည်း မြန်မာ brand တခုလောက် ကမ္ဘာလွှမ်းနေတာမျိုး မြင်ဖူးချင်သား မသေခင်ပြောပါတယ်။
မြန်မာ brand ကတော့ အမေစုလေ။ သူ့လောက်နာမည်ကြီးတဲ့မြန်မာ့ brand ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
အမေစုက ညည်းပြောမှလား ဂီမမရယ် ဦးသန့်ခေတ်ကတည်းက သိနေကြတာကို။ ပြောချင်တာက ကိုယ့်နည်းပညာ ကိုယ့်ပြည်တွင်းထွက်တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာက လက်ခံတဲ့ မြန်မာဘရန်း စစ်စစ်ပါ။
သေချင်ရင် သေလို့ရပြီလို့ များ စောင်းပြောတာလား မသိဘူး။
ဘိရုမာနို တာတဲဂိုတို ဖြစ်မလားပဲဗျာ…
အဲဒီမြန်မာ့စောင်းကို.. စက္ကူနဲ့ လုပ်တဲ့.. စက္ကူစောင်းပုံစံလေးလိုချင်မိတယ်…
AutoCAD ကျွမ်းကျင်သူတွေက.. စက္ကူကို ခေါက်ချိုးပြီး စောင်းပုံဖြစ်အောင်ဆက်လို့ရတဲ့.. ဒီဇိုင်းထွင်သင့်တယ်…
သယ်ရပို့ရလွယ်ပြီး.. ကမ္ဘာအနှံြ့မန်မာ သန်းဂဏန်းရောက်နေတာ. သူတို့တအိမ်တလုံးဝယ်တာနဲ့တယ်.. မီလီယန်ဘစ်ဇနက်ဖြစ်တယ်..။
လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ယောက် သာ Benetton လို
ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Innovation ရှိမယ်ဆိုရင် ..….
ဘာမှန်းမသိ.. ၀ယ်ဖြစ်တာပေါ့..။ ဈေးကကြီးလိုက်တာလို့.. ထင်တာပါပဲ..။
အခုနှစ်ပိုင်း… ဆန်တာမော်နီကာမှာ.. ဘနတ္တန်စတိုးဆိုင်လေးတွေ့တော့.. သတိရမိသား…
သဂျီး ခနခန ပြောဖူးတာလေး … အမှတ်ရရဲ့ …
ရုပ်ရှင်ရဲ့ လှိုင်းနဲ့ အတူ ဘာတွေ လိုက်ရောင်းလို့ ရမယ် ဆိုတာ ..
၀မ်းနည်းဇယာပဲ သဂျီး …လိုကယ် မှာက ဟိုမင်းသမီး ယောက်ျားတယောက် ကို ၇ခါယူတာသာ
စပွန်ဆာ ၀ိုင်းပေးချင်ကြတာ …. ဒါမိုးကျ …ဟွန့် ..
Fashion Brand ဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်
ရွာထဲက တစ်ယောက်ယောက်လုပ်ပါလားဟင် အားပေးမယ်
ဒီဇိုင်နာလာလျှောက်မယ် မော်ဒယ်လ်ကတော့ စိန်ပေါက်ပေါက်ရှိတယ်
မောင်လေး မမ ကိုပြောတာလေး ကော်ပီ လုပ် …မန့်လိုက်ရမား ဟင်င်င်င်…
bbq ဖြစ်မှာ ကြောက်လို့ ပြေးဘီ ချင့်…
ရွှေပြည်နန်းသနပ်ခါး၊တောင်ကြီးမောက်မယ်သနပ်ခါးတို့ကတော့ နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပါလား။
ဦးကြာ ချင့် …
သနပ်ခါး ကလည်း သူများက ကိုယ့်ကို ပြန်ဖောက်တာ ခံနေရပါဘီချင့်
ပြောရရင်.. မြန်မာငွေရှင်တွေက.. ဘာရှေ့ရေးမှန်းမသိ(မမှန်းနိုင်)တဲ့.. မြေကွက်တွေမှာ.. သိန်းသောင်းဂဏန်းထည့်မြုတ်နှံချင်.. မြုတ်နှံမယ်..။
ဒါမျိုး သုသေသန.. မားကက်တင်န်းတွေကျ.. ၂ပြား(နှစ်ပြား)တောင် မထည့်ချင်..။ :?
သတင်းလင့်ခ်အတွက် ကျေးကျေးပါ.. ဂီဂီရေ..။
Breakthrough of Ancient Tanaka with Modern Bio-Technology
Keep your Skin White, Firm, Moisturized & Cool
Youthful, fair and radiant skin begins with Tanaka ( Thanakha) –atraditional whitening secret used by women in Myanmar for more than 2000 years. Bio-essence Tanaka White Series adapts modern Bio-engineering techniques to extract highly effective whitening, moisturizing and anti-inflammatory agents from the Tanaka tree bark, providing the most natural and effective care for the skin.
All about Tanaka
Tanaka (also known as Thanakha) hasarich history in Myanmar. It isatradition al whitening secret used by women in Myanmar for more than 2000 years. It’ is used not only in their daily life, but also in traditional ceremonies where face paintings bear cultural associations of nobility and purity.
The scientific name of Tanaka plant is Limonia acidissima. The best Tanaka plants are naturally slow in growth and it takes three to ten years for the tree trunk to grow to two inches in diameter. It must be at least 35 years old to be mature enough to yield good Tanaka. The barks obtained from these trees are fragrant and resistant to pests.
Tanaka means both “cosmetic for beautifying the face” and “cleansing agent”. The production of Tanaka for use is fascinating. The simple procedure involves stripping off the bark from the plant, soaking it in water and then grounding it onamortar and mixing with water to formafragrant paste to be applied onto the face. It is recognized as an effective and ideal cosmetic for those who have to work under direct sun exposure Women who work in paddy fields always wear thick layers of Tanaka to protect themselves from the harsh sun. It also cools and soothes skin to help prevent blemishes.
သိသလောက်တော့ မြန်မာနဲ့ အနေအထိုင်ပုံစံ တူတဲ့ နိုင်ငံလေးတွေမှာတောင် သနပ်ခါး လိမ်းရကောင်းမှန်း မသိကြဘူး။
သနပ်ခါး ကို စတင်လိမ်းခဲ့တာ ဗိဿနိုး ဘုရင်မကြီးက စလူးခဲ့တာလို့ မှတ်ဖူးတယ်။
သနပ်ခါး က တချို့သော အမျိုးသမီးတွေမှာ ဓါတ်မတည့် ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ အာရှ အသားအရေ တော်တော် များများ အပူပိုင်း မှာ နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အတွက်ကတော့ နေလောင်ဒဏ် အတွက် အကောင်းဆုံးပဲလို့ ယူဆတယ်။
စကားမစပ်.. အဲဒီ သနပ်ခါးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အလှကုန် မြန်မာပြည်မှာ ရောက်နေပြီ။
ဆူး လည်း ၀ယ်သုံးကြည့်တာ မဆိုးတော့ မဆိုးလှဘူး။
အဆီ ပြန် တော်တော် သက်သာတယ်။
အတွဲလိုက်တော့ မသုံးကြည့်ရသေးဘူး။ မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာကတော့ အဆီ ထွက်နှုန်း ထိန်းထားနိုင်တယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ …နာမည်ပြောင်း ရုပ်ဖျက်ဦးမှ….
တိုင်းရင်းထဲမှာ အဘထ ရှုဆေးလည်း နိုင်ငံခြားကို ထိုးဖောက် နိုင်တယ်နော်။
အခုလည်း ဒီက လုပ်ငန်းရှင် တချို့ ရဲယိုသီး ဖျော်ရည် ဂျပန် ကို ဖောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေ ရှိတယ်။
သုသေသန မအောင်သေးလို့ အောင်သွားရင် တော်တော် အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ် ကြားတယ်။
ကိုဆူး .. …
သူတို့ ၀င်တိုးတဲ့ ဆက်တာတွေက ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာ …အစကတည်းက အတော်ကျပ်တယ်ဗျ…